Focus on Oromia: Seenaa Afaan Oromoo
Ummatni tokko ummatootaa biraa irraa addaan bahee ulaagalee inni ittiin beekamu baayyee keessaa afaan sabichaa ulaagaa duree qabuu dha. Ummatoota Gaanfa Afirka keessaa, Oromoon afaan Oromoo dubbachuun beekamu.
Gaanfa Afrikaa keessaa ummanti harki guddaan afaan Oromoo dubbata. Baayyinni ummata Oromoo, kan afaan Oromoo afaan dhalootaa taheef, miliyoona afurtama tahu. Akkasumas ummatni olla Oromoo kan afaan Oromoo akka afaan lameessotti may itti bahanis gara miliyoonaa 20 gahu. Ummata miliyoona hedduutu afaan Oromootti maayii baha jechuu dha. Walumaagalatti, afaan Oromoo afaan saba ballaati.
Afaan Oromoo gosa afaan Kushitik jedhamuu dha. Afaan Oromoo afaan ummatoota kushitik biro waliins wal-fakkata. Haala kanaan, afaan Oromoo afaan Sumalee fi afaan Afar waliin hanga tokko wal-fakkata. Afaanonni kun dame afaan kushitik bahaa keessatti argamu. Gama biroon, ummatni Oromoo walakkeessa, bahaa, dhihaan, kibbaa fi kaabaa utuu hin jenne hunduu afaanuma tokko dubbatu: afaan Oromoo. Afaan Oromoo Oromiyaa keesaa qofaa osoo hin taane, biyyoota olla Oromiyaa kannen Oromiyaa daangessan keessattis hedduminaan dubbatama.
Afaan Oromoo Oromiyaa guutummaa fi biyyoota Oromiyaa daangessan keessatti hedduminaan dubbatamu iyyuu, imaammatni mootummaa Habashaan guddina afaanichaaf danqaraa tahee ture. Afaan og-barruu akka hintaaneef bara dheeraaf uggura cimaatu irra kaa’amee ture. Kanaaf afaan Oromoo baroota dheeraaf afaan afoollaa qofa ta’ee ture. Afaan Oromoo afaan og-barruu akka hin taanee fi meeshaalee sab-quunnamtii kan akka raadiyoon ummatni akka itti hin tajaajilamneef mootummaan Habashaa ifatti dhorkee ture waan taheef.
Barreessi fi og-barruun afaan Oromoo isa mootummaa Habahsaan dhorkamee daangeffamee ture sana mana hidhaa baasanii guddisuuf qabsoo hadhooftuu geggeeffame. Afaan afoollaa irraa gara afaan og-barruutti ol-guddisuuf hayyoonnii fi beektotni Oromoo akkasumas hayyootni qooqaa kan fedha afaan Oromoo qabanii gumaacha godhaniin harra afaan Oromoo qooqaa og-barruu tahee jira.
Falmaa ummatni Oromoo godheen bara 1990 ALOtii eegalee Oromiyaa keessatti afaan Oromoo afaan hojii fi barumsaa ta’ee itti tajaajilamaa jira. Harra afaan Oromoo afaan hojii mootummaa naannoo Oromiyaa ta’eera. Mana seerattis tajaajilli afaan Oromoon kennama: kan himatus kan himatamus afanuma Oromon dhimma baha jechuu dha.
Mana barnootattis barumsi sadarkaa tokkoffaa fi giddugaleessaa afaan Oromoon kennama. Mana barumsaa sadarkaa lammaffaa fi dhaabbata barumsaa olaanoo keessattis barumsi afaan Oromoo akka afaan tokkootti kennamaa jira. Walumaa galatti, afaan Oromoo uggura jalaa bahee afaan afoolla irra taree afaan og-barruu fi afaan sab-quunnamti tahee ummata taajaajilaa jira.
Posted by Alamu at 12:30 AM
Jinenus Geleta said...
Galata argadhu Alamuu. Odeeffannoowwan barumsa kennan kanneen birootiinis gumaacha sabummaa sirraa eegamu itti fuftee ba'achuunkee gammachuu guddaa naaf kenna. Akka sirreesituuf kanan barbaadu garuu sirna qubeessuukeetiiti-keessumaayyuu hudhaa gargaaramuu irratti. Yoo irra deebitee ilaalte jechi saba arrabsu illee ni mul'ata. Afaan saba (ballaa). Oromoon ballaa miti--saba bal'aadha malee.
October 09, 2014 12:16 AM
Afaan oromoo afaan hojii EFDRE ta'u qaba